Badalka Wakiilka JSL ee UK qof noocma ah ayaa ku haboon? | Cabays.com
Badalka Wakiilka JSL ee UK qof noocma ah ayaa ku haboon?
November 6, 2019 - Written by Cabays
Cabays Media ( Aragti xul ah) — Dareen Muwaadin:
Badalka la badalay ama xilkii laga wareejiyey Ayaan Cashuur, ee wakiilka JSL ee UK, runtii kolay waa mid la filan karayey, markaa loo eego is badal cusub oo madaxweynuhu keenayo, hase ahaatee anigu ma filayn in lagu badalo qof hay’adii uu hore madaxda uga ahaa (Hay’ada Qurbejooga oo Wasaarada Arimaha Dibada hoos timaad, magac ahaan, balse miisaaniyad ahaan ka madaxbanaan) aan waxba ku soo kordhin, oo ku guuldaraystay in uu Qurbejooga iyo qaranka u noqdo mid isku xidha, keenana qorshe dalka looga faa’idaynayo Qurbejooga. Mudane Cabdi Cabdilaahi Xirsi, uma muuqdo xul madaxweynuhu u helay xilka jagada Wakiilka JSL u fadhiya UK.
Wakiilka cusubi waxa uu u muuqday mid mudoba iskaga jiray “Jiif oo jaq” in loo dhiibo xil aanu ka dabaalankarin,waa sidii ninkii adhiga raaci-kari waayey ee geela la yidhi raac!
Wakiilka JSL u joogaya UK waa in uu ahaadaa:
1- Qof aqoon buuxda u leh UK – Maadaama JSL aanay ahayn dal aqoonsi diblamaasiyadeed oo heer Safaaradeed ku hawlgalayta. JSL ma awoodo wakhti kaga luma qof qof kale sii hagayo, oo haddana masuul loo arko.
2- Qof afka Ingiriisiga iyo macaamilka caalamka saani u yaqaan habka loo ololeeyo dunida Reer Galbeedka, siiba Yuurub.
3- Waa in uu ahaadaa mid fahansan xilka loo dhiibay iyo baaxaa hawsha sugaysa. basle mid aan u arkayn in ardaa gooni ugu xidhan la geeyey.
4- Waa in uu yahay qof fahansan dhaawaca ku yaal bulshada UK intii doorashadii 2017kii ka dambaysay, dadkana isku keeni karaa, balse aanu ahayn mid sii kala diraya, isagoo wali xambaarsan aragti qayb ka ah qaybsanaanta qurbejooga ee hore.
Ayaan Cashuur maxaa lagu xusuusan doonaa:
Ayaan Cashuur, runtii waxay ahayd haweenay hawsha loo dhiibay la odhan karo intii awoodeeda ah umay yaraysan, waxayna ahayd mid muujisay kartida loo baahan yahay in aanay ku xidhnayn nin xilkaa gudan karo oo qudha. Ayaan waxay sidoo kale muujisay in ay leedahay xirfada galaangalka iyo sida hay’adaha dawliga ah ee UK xidhiidh loola yeesho, loogana faa’ideeyo.
Ayaan Cashuur, inkastoo dadka qaar aragti taa ka duwan ka qabeen, haddana waxa aan la dafirikarin in ay ka karti, xirfad iyo bulsho ururin wanaagsanayd xubnihii ka horeeyey ee xilkana Walkiilka UK ee JSL soo qabtay. Sidaa oo ay tahay waxay ahayd haweenaydii kali ah ee JSL wakiilka uga ahayd dal kale.
Waxa aynu eegnaaba waa Ayaan Cashuur ka dib nooca uu noqdo xafiiska Wakiilka JSL ee UK oo ah mid ay tahay in madaxweynuhu fiiro gaara u yeesho sida uu u hawlgalayo masuulka cusub si aanay u noqon sidii Hay’adii Qurbejooga ee aanay cidi la xisaabtamin, qarankana waxba ku soo kordhin.
Afeef: Wakiilka cusub waligeyo wax-xumaan ahi mana dhaxmarin, waxase aan aamisanahay in muwaadinkastaaa xaq u lee yahay in uu cabiro araagtidiida iyo argtida uu ka qaatay qofka xil qaran oo umadeed haya, darajaduudoono ha ahaatee.